कुकुरका लागि स्मार्ट भेस्‍ट::kamananews
कुकुरका लागि स्मार्ट भेस्‍ट
यस वर्षको मोवाइल वर्ल्ड कंग्रेसका विशेष आकर्षणमध्ये घरपालुवा कुकुरले लगाउने ‘स्मार्ट डग भेस्ट’ पनि रह्यो ।
फिलिपिन्‍सका स्टार्ट अप व्यवसायी टोनी कौटुले निर्माण गरेको यो स्मार्ट भेस्ट कुकुरलाई लगाइदिएपछि मालिकलाई धेरै हदसम्म हाइसञ्चो हुनेछ ।
भेस्टमा राखिएको सेन्सरले कुकुरको मुटुको गति, तापक्रम, कुकुर कराउने तथा भुकेको आवाज र शरीरको तापक्रम नाप्नेमात्र होइन कुकुर कहाँ पुगेको छ भन्ने जानकारीसमेत दिन्छ ।
भेस्टमा एउटा सिमकार्डजस्तै चिप्स राखिएको हुन्छ, त्‍यही सिमले कुकुरबारे जानकारी मालिकको स्मार्ट फोनसम्म पुर्‍याउँछ । यो भेस्टले कुकुरलाई धेरै तातो भएमा कारबाट बाहिर निकाल्न सुझाव दिने र धेरैबेर उभिएर कुकुरको भुँडा दुखेकोसमेत जानकारी मालिकलाई दिन्छ ।
यो भेस्टको मूल्य १५० देखि १९० युरोसम्म तोकिएको छ । यो भेस्टको पहिलो उत्पादन सन् २०१८ को अन्त्यसम्म उपभोक्ताको हातमा पुगिसक्ने उत्पादकले कौटुले जनाएका छन् ।
‘यो व्यवसायप्रति म आशावादी छु, किनभने संसारका १७ करोड घरमा कुकुर पालिएको छ’ उनले भनेका छन् ‘कुकुर हाम्रो परिवारको सदस्य हो, यो भेस्टले हाम्रो कुकुरलाई सजिलोसँग बुझ्न सहयोग गर्नेछ ।’
सोम, फाल्गुन २१, २०७४ मा प्रकाशित
विज्ञान/प्रविधि बाट अन्य
सेलेब्रिटी रोबोट ‘सोफिया’ पहिलो पटक नेपाल आएर भनिन्- ‘प्रविधिको प्रयोगले गरिबी हटाउन सकिन्छ’
काठमाडौँ — चर्चाको शिखरमा रहेकी सेलेब्रिटी रोबोट ‘सोफिया’ ले नेपाल जस्तो विकासोन्मुख देशमा प्रविधिले गरिबी हटाउन सहयोग पुर्‍याउने बताएकी छन् । बुधबार राजधानीमा राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) ले आयोजना गरेको ‘सार्वजनिक सेवाका लागि प्रविधि’ विषयक...
तपाईले चलाउने फेसबुकको रङ निलो छ, किन ? जान्नुहोस् यो रोचक तथ्यहरु, खास कारण यस्तो छ
काठमाडौ। विश्वमा पौने दुई अर्बभन्दा धेरै प्रयोगकर्ता रहेको फेसबुकको लोगो तथा साइट नै किन निलो रङको होला ? फेसबुकमा कसैले पनि ब्लक गर्न नसक्ने व्यक्ति को हुन् । कुनैपनि व्यक्तिको मृत्युपछि उसको फेसबुक अकाउन्ट के...
चितवनमा पहिलो पटक हालसम्मकै ठुलो वैज्ञानिक सम्मेलन
अन्तर्राष्ट्रिय केमिकल वैज्ञानिक सम्मेलन आजदेखि सौराहामा शुरु हँुदैछ । सम्मेलनमा २० देशका १०० जना वैज्ञानिक सहभागी हुने बताइएको छ । नेपाल केमिकल सोसाइटी र वीरेन्द्र बहुमुखी क्याम्पस, भरतपुरको संयुक्त आयोजनामा सम्मेलन शुरु गर्न लागिएको हो...
तपाइको फेसबुक अकाउन्ट अरुले त खोलिरहेको छैन ? यसरी थाहा पाउन सकिन्छ
साइबर अपराधीहरुलेे इन्टरनेट प्रयोगकर्ताका विभिन्न अकाउन्टहरु ह्याक गर्ने र प्रयोगकर्ताका डाटाहरुको दुरुपयोग गर्ने घटना नौलो होइन । पछिल्ला वर्षहरुमा अनलाइनमार्फत प्रयोगकर्ताको पहिचान चोरी गर्ने घटना तीव्र रुपमा बढिरहेको छ । प्रचलनमा रहेका सोसल मिडिया साइटहरुमध्ये फेसबुक धेरै...
तपाइको कम्प्युटर स्लो भएर तनाबमा हुनुहुन्छ ? यसो गर्नुहोस
शर्मिला शर्मा आइटी इन्जिनियर कहिलेकाहीँ कम्प्युटर खुल्न धेरै समय लाग्छ । कम्प्युटर चलाउन ढिलो हुँदा कम्प्युटर चलाउन नै हैरान लाग्छ । कम्प्युटरमा राखेका विभिन्न सफ्टवेयर कम्प्युटरसँगै खुल्ने हुँदा कम्प्युटरले खुल्न समय लिन्छ । हामीले सफ्टवेयर...
चन्द्रमामा मोबाइल नेटवर्क, चल्ने भयो फोर जी
विश्वका कैयन् भागमा अहिले पनि मोबाइल फोनको नेटवर्क उपलब्ध छैन । तर वैज्ञानिकहरु चाहिँ चन्द्रमामा मोबाइलको नेटवर्क पुर्याउन जुटेका छन् । आगामी वर्ष इतिहासमै पहिलोपटक चन्द्रमामा मोबाइल नेटवर्क उपलब्ध हुने भएको हो । यदि त्यसो...
अब भाइबरमा एकसाथ एक अर्ब मानिससँग च्याट गर्न सकिने
म्यासेजिङ एप भाइबरले अहिलेसम्मकै ठूलो ग्रुप च्याट भाइबर कम्युनिटी घोषणा गरेको छ । भाइबर कम्युनिटी च्याट ग्रुपमा एक अर्ब जना सदस्य सीमा तोकिएको छ । यस ग्रुपका सदस्यहरु कमेन्ट र प्रतिक्रियामार्फत अन्तर्क्रिया गर्न सक्नेछन् ।...
स्मार्टफोन निर्माताहरुमा आइडिया सकिएकै हो ?
पछिल्लो दशकमा स्मार्टफोन उद्योग विश्वमा सबैभन्दा तिव्ररुपमा अगाडि बढिरहेको र सबैभन्दा चलायमान उद्योगको रुपमा रह्यो । तर के अब स्मार्टफोन व्यवसायको मार्गमा तगारो लागेको हो त ? बार्सिलोनामा भएको मोबाइल वल्र्ड कंग्रेसका क्रममा सार्वजनिक स्मार्टफोन...
काठमाडौं । आजकालका बच्चाहरु टच स्क्रिनमा अभ्यस्त छन् । वर्षदिन नपुग्दैदेखि हामीले बच्चालाई स्मार्टफोन र ट्याबलेटहरुमा भुलाइरहेका छौं । तर, यसले उनीहरुको मानसिकमात्र नभई शारिरिक विकासमा समेत गम्भिर असर पर्ने गरेको तथ्य खुलेको छ । बेलायतका...
पृथिवीमा मानिसको संख्या कम भएजस्तै गरी अमेरिकी वैज्ञानिकहरुले मरेको मानिसलाई पुनः ज्यूँदो बनाउँदै, यस्तो छ अचम्मको तरिका
एजेन्सी। अहिलेको विज्ञानको युगमा असम्भव भन्ने के पो छ र रु त्यसैले मरेको मानिसलाई पुनः ज्यूँदो बनाउने प्रयोगमा अमेरिकी वैज्ञानिकहरु जुटिरहेका छन् । वैज्ञानिकहरुका अनुसार एएटा यस्तो सिद्धान्त छ जसको सहयोगले मरिसकेका मानिसलाई पनि...